कहिलेदेखि खुल्दैछन लामो दूरीका यातायात ? यस्तो व्यवसायीको तयारी — Motivatenews.Com
कहिलेदेखि खुल्दैछन लामो दूरीका यातायात ? यस्तो व्यवसायीको तयारी
काठमाडौं – यातायात व्यवसायीहरु लामो दूरीका सवारी साधनहरु चलाउन तयार भएका छन । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ लगायतका व्यवसायीले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्नका लागि तयारी गरीरहेका छन ।
सरकारले बैङ्क किस्ताको म्याद थप र पुनर्कर्जा लगायतको व्यवस्था गरेर उनीहरूको माग पूरा गरेपछि व्यवसायी आफ्ना सवारी साधन मर्मतसम्भारमा जुटेका छन । सोमबार यातायात व्यवस्था विभागसँग छलफल गरी उनीहरुका माग अनुसार सरकारले सहुलिएत दिने सहमति भएको थियो ।
तर व्यवसायीहरुले कहिलेदेखि यातायात सञ्चालन गर्ने भन्ने कुराको कुनै निश्चित समय तोकिएको छैन । लामो र मध्यम दूरीका सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ । महासङ्घ र विभागबीच सोमबार भएको छलफमा लामो तथा मध्यम दूरी खुलाउन उच्चस्तरीय समितिलाई निर्णय गर्न विभागले तत्काल सिफारिस गर्ने सहमति भएको छ ।
यातायात मजदुरलाई आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणको व्यवस्था व्यवसायीले नै गर्ने तर यात्रुको स्वयंले व्यवस्था गर्नुपर्ने सहमति भएको छ । उपत्यकाका बस स्टेसनमा स्वचालित सेनिटाइजेसन काठमाडौँ महानगरपालिकाले राख्ने भएको छ तर कहिलेदेखि गाडी सञ्चालन गर्ने भन्ने सवालमा आज (मङ्गलबार) पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिने महासंघले जनाएको छ ।